Iindaba -Ukukhuphuka kweendleko zokulahla amaxabiso kuxhasa amaxabiso e-rebar yaseYurophu
INGXELO YOMSEBENZI OBANDAYO
INDLELA YOKUSETYENZISWA KWESITOLO
IPlastikhi YOKUBumba INDLELA
I-HSS ISETYHULA YABONA AMABALA
TCT UKUBANDA OKUBANDAYO
AMABHODI AQINISEKILEYO KWISEMI
I-MILLED FLAT BAR
ISETYHULA WABONA AMABANGELA
Ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezilahliweyo kuxhasa amaxabiso ama-rebar aseYurophu
Ukuthozama, ukunyuka kwamaxabiso ngokusekwe kula maxabiso kwaphunyezwa ngabavelisi be-rebar kumazwe aseNtshona Yurophu, kule nyanga. Ukusetyenziswa kweshishini lokwakha kuhlala kusempilweni. Nangona kunjalo, ukunqongophala kwezinto ezinkulu ezenziweyo kuthathelwa ingqalelo kunye neenkxalabo malunga neCovid-19 iyaqhubeka.
Amashishini aseJamani amisa umgangatho wexabiso
Abavelisi baseJamani abavelisa kwakhona umgangatho wexabiso le- € 200 ngetoni nganye. IiMills zichaza iincwadi zoku-odola ezilungileyo, kwaye amaxesha okuhambisa aphakathi kweeveki ezine ukuya kwezintandathu. Ukuthengwa kuncitshisiwe, kodwa umsebenzi kufuneka uthabathe kwiinyanga ezizayo. Abavelisi basekhaya badibana nemida yenzuzo njengoko bengekaphakamisi ixabiso labo lokuthengisa.
Ukomelela kolwakhiwo lwaseBelgium kubuzwa
KwiBelgium, amaxabiso esiseko ayenyuka ngenxa yokunyuka kwenkcitho ezindala. Abathengi kunokwenzeka ukuba bamkele inkqubela phambili, ukuze bafumane izinto. Nangona kunjalo, iiprosesa ezininzi ziye zasilela ukubonakalisa iindleko zokufaka endaweni yexabiso lokuthengisa iimveliso zabo ezigqityiweyo.
Abathathi-nxaxheba kwityathanga lonikezo banezimvo ezahlukileyo malunga namandla ecandelo lokwakha. Abaphathi bezinto zokuthenga banenkxalabo yokuba amabango anokuhla ebudeni bonyaka ukuba iiprojekthi ezintsha azikhutshwa.
Ithemba lotyalo-mali lukarhulumente e-Itali
Abenzi be-rebar base-Italiya banyanzelisa ukuhla kwexabiso eliphantsi ngo-Septemba. Ukuphindaphindeka okuncinci kwicandelo lokwakha lwasekhaya kuqatshelwe. Kukho ithemba lokuba utyalomali lukarhulumente liza kulonyusa elo candelo, kwixesha elifutshane. Abathengi, nangona kunjalo, bayaqhubeka nokuthenga ngononophelo. Imiba yezoqoqosho iyaqhubeka phakathi kokuqhambuka kweCovid-19.
Abarhwebi bezinto ezilahliweyo base-Itali babenako ukunyusa amaxabiso abo okuthengisa, kule nyanga, bevuselelwe yimeko ekhulayo yamanye amazwe. Nangona kunjalo, iinkqubo zokuthenga izixhobo ezilahliweyo zalapha zilinganiselwe.
Ukugcinwa kwesigidi kusika imveliso yaseSpain
Amaxabiso esiseko saseSpain esizinzileyo kule nyanga. Iziphumo zincitshisiwe ngenxa yeenkqubo zokulondolozwa kwamatye okusila, kodwa ukunqongophala kweshishini elikhulu levolumu kuyaphawulwa. Abathengi balindele ukufumana iikowuteshini kwindawo yangaphambili yeGallardo Balboa rebar mill, ebekwe eGetafe, nebisandula ukufunyanwa liqela laseCristian Lay.
Umsebenzi kwicandelo lokwakha uqhuba kakuhle. Iimeko kulo lonke ushishino ziye zema ngxi, ngenxa yokulibaziseka kweeprojekthi kunye nokusilela kwezigqibo phakathi kobhubhane we-coronavirus.
Ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezilahliweyo kuxhasa i-rebar yaseYurophu ...
Amaxabiso eNsimbi yaseYurophu aphinde abuye njengokungenisa iT ...
Ukubuyiswa kweemarike zentsimbi yaseTshayina kuyaqhubeka
Umnxeba: 0086 21 61052109
Idilesi: RM 907, NO. 377, JINGAO INDLELA, PUDONG, Shanghai, CHINA
ISetyhula Saw iBlade yensimbi, ISetyhula Saw Blade, Hss M35 ISetyhula Saw iincakuba, Hss M2 ISetyhula Saw Iincakuba, Isixhobo soMsebenzi eshushu sentsimbi esinyibilikisiweyo, Tct ISetyhula Saw Iincakuba,